यसरी जन्मियो ओखती साबुन
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसमा दुईमत छैन । ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आवद्ध भएको देशमा किन कृषि क्षेत्रबाट सोचेजस्तो प्रतिफल पाउन सकिएको छैन ? कृषि शिक्षा विकास भएपनि कृषि शिक्षाले कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो ? विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक र प्राविधिक शिक्षा दिनबाट नेपाली शैक्षिक प्रणाली चुकेको हो ? जस्ता विभिन्न प्रश्न साथै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिविका पूर्व डीन प्रा.डा दुर्गादत्त ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
हाल श्री जय काली जडीबुटिको अध्यक्ष छु । यसले ओखती हर्वल साबुन उत्पादन गर्छ । दुई ठाउँमा पार्ट टाईम काम गर्छु ।
राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताले प्रविधिक शिक्षा पाउनुपर्छ, भन्ने आवाज उठ्यो । तर मास्टर्स डिग्री सकिएकाहरु बेरोजगार भएको अवस्था छ । किन यस्तो हुन्छ ?
कृषि शिक्षा २०१४ साल देखि सुरु भएको हो । पहिला जगदम्वा कृषि भवन काठमाडौँमा थियो । पछि २९/३० तिर रामपुर गएपछि कृषि स्नातक पढाई सुरु भयो । त्यति बेला सम्म हामीले जति पनि विद्यार्थी उत्पादन गरेका छौँ, कोहि पनि बेरोजगार छैन । कृषि पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थीहरु बाहिर गएका छन् । दिनानुदिन ब्रेनड्रेन भइरहेका छन् ।
२० देखि २५ प्रतिशत ‘क्रिम’ विद्यार्थीहरु बाहिर गएका छन् नेपालमा जति पनि छन् उनीहरु सबैले
काम पाएका छन् । यहाँ रहेका कोहि पनि कृषिमा बेरोजगारी छन् भन्ने मेरो जानकारीमा छैन ।
अरु पाठ्यक्रमहरुमा पनि समस्या देख्नुभएको छ ?
समस्या छ । एमबीबीएस तथा बिई गर्नेहरु पनि धेरै छन् । यीनिहरुले काम नपाउने अवस्था छ । नेपालको आवश्यकता हेरेर, आन्तरिक, बाह्य मार्केट हेरेर अबको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । कुनै बिषय यस्तो छ कि हामी पढाउछौ बिद्यार्थी उत्पादन हुन्छ तर बिषय अनुसार मार्केट हुदैन । त्यसैले हामीले समुदायको आवश्यकता हेरेर अध्ययन गर्नुप-यो, आउने १० वर्षमा कस्तो जनसंङख्या उत्पादन गर्नुपर्यो । खै त अध्ययन अनुसन्धान भएको ? नेपालमा यो किसिमको समस्या छ ।
सरकारको यो बिषयतिर ध्यान नै थिएन । अहिले बिस्तारै नयाँ सरकार आइसकेपछि यो शिक्षालाई जोड दिएको छ ।
अब आउने ५ वर्षमा किसानको आवश्यकता के हो त्यसलाई मध्यनजर गरेर अगाडी बढ्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
कृषि शिक्षाको लागि आवश्यक प्रविधिमा नेपाल कत्तिको सशक्त छ ?
कृषि शिक्षा अरु शिक्षा भन्दा भिन्न किसिमको छ । यो फिल्डमा गएर अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकासका तीन ओटा खम्बा हुन्छन्, एउटा शिक्षा, जसमा हामी जनशक्ति तयार गर्छौ । अर्को, रिसर्चबाट प्रबिधि तयार गर्छौ । र विकाश यसले प्रबिधि प्रसार गर्छ । तर यी तीन बिषयको तालमेल मिलेको छैन । हामीले जनशक्ति तयार गरेका छौ तर रिर्सचमा, संरचनागत अन्र्तगत त्रुटि छ ।
कृषिमा जस्तो जिल्ला जिल्लामा रहेका डाडो (जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ) अफिसहरु उनीहरुले प्रविधीको त्यति राम्रो उपयोग नहुन सक्छ । यी तीन ओटाकै कार्यमा तालमेल मिलेको छैन ।
हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरुमा प्राक्टिकल राम्रो गराईरहेका छौँ, उनिहरुले नेपालमा मात्र होईन विदेशमा पनि टप पोजिसन हासिल गरिरहेका छन् । कतिपय कुरामा केहि कमिकमजोरीहरु होलान् । हाम्रो करिकोलम धेरै स्र्टयान्डर छ, हाम्रा बिद्यार्थीहरु ग्लोवल स्टान्र्डरका छन् हाम्रा कृषि स्नातकहरु विदेशबाट सिधै पिएचडि गरेर नेपालमा आउने पनि छन् ।
अहिले सरकारले बनाइरहेको नीतिनियम र विद्यार्थीहरुको आवश्यकताको तालमेल मिलेको छ ?
पहिलाको DADO र सेवा केन्द्र भङ्ग गरेर अहिले कृषि विज्ञान केन्द्र खोल्ने कुरा भइरहेको छ । यो प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिका मा खुल्दै छ । अब यसले नेपालको भौगोलिक विषेशताको आधारमा त्यहाँको कम्पेरेटीभ एड्भान्टेजेज के छ ? किसानको कस्तो अवस्था छ ? त्यहाँको हावापानी त्यहाँको किसानले कस्तो तरिकाले खेती गर्दछन् त्यो सबै मध्य नजर गरेर उनीहरुको लागि प्लान बनाउनुपर्छ र किसानालाई सकेसम्म तलिम दिनुपर्छ ।
अझैपनि कृषिमा आबद्ध ग्रामिण समुदायमा आमावुवा सबैजना आफ्नो सन्तान पाईलट इन्जीनियर बनोस भन्ने चाहन्छन् । यसप्रति आकर्षण नभएको कृषि र कृषि सम्बन्धी जानकारी नभएर पनि हो । अर्कोकुरा प्रविधि र अबसरहरुको बारेमा जानकारी नभएको कारणले यो पेशा ओझेलमा परेको हो ।
अहिले किसानले बुझ्न थालेका छन् । कृषि प्राबिधिक शिक्षा रोजगारमुलक छ, यो पढेर तुरुन्त काम पाउन सकिन्छ, भनेर धेरै जसो आकर्षक भएका पनि छन्, बिगतमा थाहा नभएर, जनचेतना को अभावले पनि यस्तो भएको हो ।
कृषि शिक्षामा देखिएका समस्याहरु के के छन् ?
युनिभर्सिटीहरुमा अधिक मात्रामा राजनीति भइरहेको छ । यसलाई न्युट्रलाइज गनुप¥यो । यसमा विद्यार्थी, शिक्षक,कर्मचारी कसैलाई पनि राजनीतिमा समावेश गराउनु भएन ।
दोस्रो, शिक्षा कृषि, रिसर्च, र विकास यी तीनै विषयलाई जोड्न जरुरी छ तर यो जोडिएको छैन । प्रविधि विकास गर्ने संरचना प्रविधिमैत्री छैन, किसानमैत्री छैन, कर्मचारी मैत्री छ । यसलाई पुर्नगठित गर्न जरुरी छ ।
तेस्रो स्थाइत्व पनि छैन । नयाँ कृषिमन्त्री आउँछन् । आफ्ना मान्छेलाई ED लगायत ठूल्ठूला पदमा राख्छन् । अनि सरकार परिवर्तन हुनासाथ ती पदमा आसिन व्यक्तिहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् । त्यसैले सम्पूर्ण ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चौँथो प्राविधीक रुपमा हामी सशक्त बन्नै सकेनौँ । यसको लागि हरेक तह र तप्काबाट कोशिस गरिनुपर्छ ।
पाँचौँ भनेको विद्यार्थीहरुलाई ईन्टर्नसिपको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि आएको अनुदान, छात्रवृत्तिको व्यवस्था कस्तो छ ?
हाल नेपाल सरकारको तर्फबाट युनिभर्सिटी शिक्षा त्यति महंगो छैन । त्रिभुवन विश्व विद्यालयकै कुरा गर्ने होे भने कृषि शिक्षा महँंगो छैन । (B.Sc. Ag.) मा शुल्क धेरै छैन । मास्टर्सको (M.Sc. Ag. )पनि शुल्क पनि धेरै छैन । तर नेपाल सरकारले युनिभर्सिटीलाई जुन रकम दिन्छ, त्यो सुक्दै गइरहेको छ । अब हाइस्कुल शिक्षा फ्री गरिदिने र उच्च शिक्षामा आफै कमाउ भन्ने सिद्धान्त भएकोले नेपालमा पनि उच्च शिक्षाले जति अनुदान पाउनुपर्ने हो , त्यो घटिरहेको छ ।
भारतकै कुरा गर्दा, त्यहाँ पनि खान पुग्दैन थियो । पछि उनीहरुले प्रविधिमुलक कृषि शिक्षाको शुरुवात गरे । त्यहाँ शिक्षा, अनुसन्धान र विकास यी तीन कुरालाई जोड दिए । जबसम्म अनुसन्धान गरिँदैन, शिक्षालाई जोड्न सकिँदैन यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, यी कुराहरुमा समन्वय हुनुप-यो ।
नेपाल कृषिमा आश्रित भएको तथ्याङ्क मात्रै छ, हामीसँग त । योजना आयोगमा तपाई लामो समय हुनुहुन्थ्यो । किन यस्तो भएको ?
योजना आयोगमा भूउपयोग नीति तर्जुमा गर्न म त्यहाँ गएको थिएँ । दस्तावेज बन्यो । नवौं पञ्चवर्षिय दस्तावेजमा ‘भू- उपयोग नीति’ भनेर लेखिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धानमा अलि कमजोर भयो । कृषिमा जति पनि विकास भयो त्यो पर्याप्त छैन । हामीसँग जनशक्ति कम भयो । ३/ ४ वटा गा.वि.स मा एउटा कृषि केन्द्र /उपकेन्द्र हुन्थ्यो । त्यसले सबैलाई हेर्न सक्दैन थियो । कृषकलाई दिइने सेवा नै उनीहरु समक्ष पुर्याउन नसकेकाले हामी पछि परेका हौं ।
अबका दिनमा ‘एक्स्टेन्सन वर्करहरु’ जो छन् उनीहरुलाई परिचालन गरेर किसानको घरदैलो मा पु-याउन सक्नु पर्छ । नेपाल सरकारले साना साना किसान लाई मात्र हेरेर हुँदैन । अब दुई किसिमका रणनीति लिनुपर्यो । । एउटा साना किसानलाई , अर्को ठूला कृषि उद्यमीलाई ।
साना किसान लाई हेर्ने र उद्यमीलाई नहेर्ने गर्दा कृषि विकाश हुन सक्दैन । अरु देशमा के हुन्छ भन्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिक उद्योगमा राखिन्छ । उनीहरु ठुला उद्योगलाई मिसीनीकरण गर्ने कस्ट उत्पादनलाई कम गर्ने र त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने, नेपालमा पनि साना किसानका साथ साथै ठुला तथा मझ्यौला कृषि उद्यमीलाई पनि अगाडी लैजानु अवश्यक छ । जस्तो इन्डीयामा टाटा चिया बगान छ तर टाटा त किसान होईनन् । उनि ठूला उद्यमी हुन् । नेपालमा पनि त्यस्ता उद्यमीलाई भन्नपर्यो । आउ योजना बनाउ । र कृषिमा लगानी गर । यस्ता उद्यमीलाई विशेष किसीमको सहुलियत दिनुपर्यो । यसो गर्दा कृषि यान्त्रिकरणमा टेवा पुग्ने, उत्पादन लागत कम हुने हुँदा उद्यमीहरुको कृषि वस्तुको निर्यात सहज हुन्छ ।
तपाई श्री जय काली जडिबुटि उद्योगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो ओखती साबुनको सोँच कसरी जन्मियो ?
ओखती सावुन एक र्हवल सावुन हो, म एजुकेशन र रिसर्चलाई जोड्नुपर्छ भन्छु मेरो यसमा खास उद्देश्य के छ भने नेपालमै उत्पादन हुने उच्च स्तरका जडिबुटिलाई प्रशोधन गरेर, नयाँ नयाँ भेराइटिको सावुन, त्यसपछि कस्मेटिक सामाग्री हुन सक्छ, नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने । मलाई लाग्छ, यो हर्वल सावुन देश भरि पुगीरहेको छ । हामीलाई अहिले अलि समस्या छ । सरकारले हामी जस्तो उद्योगलाई विषेश किसीमले हेर्न सक्नु पर्छ ।
ओखती साबुनमा चिउरीको प्रयोग हुन्छ । हामीले एलोभेरा तितेपाति, जस्ता नेपालका चिजहरु प्रयोग गरेका छौँ । कोकोनट को तेल प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । हामीले के सोचेका छौँ भने नेपालकै कच्चापदार्थबाट उत्पादन गर्न सकियोस् । मेरो सोचाई भनेको नेपालमा पाईने विभिन्न जडिबुटिहरुलाई कम्बीनेसन गरेर राम्रो उत्पादन दिने हो ।
ओखति साबुनको उत्पादन काठमाडौँमा हुन्छ, हाम्रो बिभिन्न डिलरहरु जिल्ला जिल्लामा रहेका छन्, डिलरकै माध्यमबाट बितरण गछौँ । दैनिक ५०/६० हजार पिस उत्पादन हुन्छ ।
अहिले साबुनका लागि केहि आवश्यक कच्चापदार्थ अन्य मुलुकबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ । कर बढिरहेको छ । खर्च बढिरहेको छ, तर हाम्रो वस्तुको मुल्य बढाउन सकेका छैनौँ ।
नेपाली उद्योगहरुले जनशक्तिको चर्को अभाव झेलेको भन्छन्, के हो वास्तविकता ?
महिला कामदारको संख्या बढी छ । ८० प्रतिशत महिला हाम्रोमा काम गर्छन् । हामी स्थानिय महिलाहरुलाई बढी प्राथमीकता दिन्छौँ ।
शिक्षालाई व्यवसाय तथा उद्योग सँग जोड्न जरुरी छ । यसरी जोड्न नसके सम्म बिजनेस र शिक्षा दुबै प्रभावकारी हुँदैन । यो तादम्यता नमिलेसम्म विकास हुन सक्दैन ।
घोडा चढेर राराको फन्को : मन्त्रमुग्ध पार्ने रारामा पर्यटक बढे
बैंकहरु सहर केन्द्रित भए, नाफामूखी भए जसकारण हाम्रो पूँजी बैंकिङ च्यानलमा आउन सकेको छैन भन्ने अधिकांश ...
बेवारिसे लाशको सतगद गर्ने एक नायक : विनय, 'जो लाशसँग प्रेम गर्छन्'
विनयजंग बस्नेत । बेवारिसे लाश जलाउँछन् । विधिवत् रुपमा लाशहरुको दाहसंस्कार गर्छन् । किरा पर...
साउन १९, २०७५ | शनिबार